हिटरको गलत प्रयोगले ज्यान जान सक्छ! ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु – Karnalisandesh
हिटरको गलत प्रयोगले ज्यान जान सक्छ! ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
प्रकाशित मितिः ७ माघ २०७६, मंगलवार १५:५५ January 21, 2020
काठमाडौँ। चिसोबाट बच्न वा राहत प्राप्त गर्न अधिकांशले हिटर प्रयोग गरिरहनु भएको छ होला। हिटले कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा भने सधैलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। हिटरले क्षति स्वास्थ्य र स्किनमा पुर्‍याइरहेको हुन्छ। त्यसैले, तपाईँ हिटर वा ब्लोअरको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला यि कुराहरु जानि राख्न्होस्।
– कहिल्यै पनि बन्द कोठामा हिटर अन गरेर ननिस्कनुहोस्। किनकी यसबाट वाहिरिने कार्वनमनोअक्साइड ग्यास मानिसको लागि निकै हानिकारक हुन्छ।
– हिटर जलाएर पनि कहिल्यै निदाउनु हुँदैन। यसो गर्दा श्वासप्रश्वासमा बाधा उत्पन्न भएर ज्यानै जान सक्छ।
– मुटु, श्वासप्रश्वास, खोकीजस्ता समस्या भएका व्यक्तिले एयर ब्लोअर र हिटरको प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि प्रयोग गर्ने हो भने कोठामा ताता पानी राख्न सक्नुहुन्छ। ताकी ब्लोअरको कारण हावा सुख्खा नहोस्।
– छालाको लागि पनि हिटर राम्रो मानिँदैन। लामो समयसम्म हिटरमा बस्दा छाला सुख्खा भएर जाने गर्छ। त्यति मात्र नभएर रातो दाग बस्ने, चिलाउनेजस्ता समस्या पनि हुन्छ। हिटरले आँखालाई पनि सुख्खा बनाउन सक्छ। जसको कारण आखा पोल्ने जस्ता समस्या पनि निम्तिने गर्छ।
यदि हिटर या ब्लोअरमा बस्ने बाध्यता छ भने मनतातो पानी पिइराख्नुपर्छ। त्यसको साथमा चिया, कफि, सुपजस्ता पेयपदार्थको पनि प्रयोग गर्नुस् । र, छालामा मोइस्चराइजरको प्रयोग गरिरहनुहोस्।
हिटरको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
– हिटरको नजिक छिटो जल्ने खालका कुनै पनि सामाग्री राख्नुहुँदैन। जहिले पनि कागज, ब्लाइंकेट, कपडा, दाउरालगायतका सामाग्री हिटरभन्दा टाढा राख्नुपर्छ।
– हिटरलाई त्यस्तो ठाउँमा पनि राख्नुहुँदैन। जुन बाटोबाट बढी ओहोर दोहोर गरिरहनुपर्छ। अझ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषय के हो भने हिटरलाई बच्चाले नभेट्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। यसलाई कडा सतहको किनारमा राख्नुपर्छ।
– समय समयमा चलिरहेको हिटरलाई बन्द गरिरहनुपर्छ। र, हिटर बलेको बेला ढोका र झ्याललाई पनि खुला राख्नुपर्छ। हिटर नजिक बस्नुभएको छैन भने बन्द गर्दा बेस हुन्छ।